नेपालकै यो ठाउँमा अविवाहित युवतीले क्वारेन्टाइन बसेकै बेला बच्चा जन्माइन् – Online Nepal
नेपालकै यो ठाउँमा अविवाहित युवतीले क्वारेन्टाइन बसेकै बेला बच्चा जन्माइन्
April 24, 2020 497
काठमाडौं । उदयपुरबाट आएर ओखलढुङ्गाको रामपुरमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी एक अविवाहित युवतीले मृत शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । मोलुङ गाउँपालिका–१ की १६ वर्षीया अविवाहित युवतीले क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला बच्चा जन्माएकी हुन् ।
मङ्गलबार साँझ क्वारेन्टाइनमा ल्याइएकी युवतीको स्वास्थ्यमा बुधबार समस्या देखिएको थियो । केही समयपछि मृत शिशु जन्मिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गोपाल नेपालले जानकारी दिनुभयो । शिशुको मृत्यु भइसकेको र आमाको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
“अघिल्लो दिन उदयपुरबाट आएको हुनाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर ल्याइयो । भोलिपल्ट बच्चा पो जन्मियो । समय नपुगी जन्मिएर होला शिशु खासै स्वस्थजस्तो थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “मृत शिशु प्रहरीको जिम्मा लगायौैँ र आमालाई यहाँको स्वास्थ्य संस्थामार्फत अस्पतालमा सिफारिस गरिएको छ ।” क्वारेन्टाइनमा बच्चा जन्माउने युवतीलाई अहिले ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । रक्तस्रावको केही समस्या भए पनि युवतीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोनाको डरले शिशुको श’व परीक्षण भने गरिएको छैन । आमा केही दिनअघि मात्रै उदयपुरबाट आएकाले कोरोनाको सङ्क्रमण हुनसक्ने डरले परीक्षण नगरेको बुझिएको छ । शिशुको श’व परीक्षण गरे÷नगरेको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय वरुणेश्वरका प्रहरी निरीक्षक श्रीप्रसाद राईले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन । “अविवाहित भनिएकी युवतीले मृत शिशु जन्माएकी हुन् । अहिलेलाई यत्ति भनौँ । शिशुको श’व परीक्षणलगायतका कुरा पछि गरौँला नत्र माथिल्लो निकायमा सोध्नुस्”, प्रहरी निरीक्षक राईले भन्नुभयो ।
Prevसुत्केरीलाई सहयोग गर्न जादा पसले संग पर्यो लफडा (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextइन्द्रेणीबाट भाइरल ८ बर्षिय आयुसा गौतमको घरमा पुग्दा गीत गाउँदा गाउँदै भक्कानिएर रोइन (भिडियो हेर्नुहोस्)
भर्खरै सप्तकोसीमा डेन्जर बा’ढी – 40 ढोका खोलियो: छिनभरमै डुब्यो बिहार! ढोका वन्द गर्न मोदिको बिन्ती (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं उपत्यकामा थप १ सय ५९ जनामा संक्रमण,काठमाडौंमा मात्र १ सय ३४ थपिए
दांत माझ्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन?बिग्रिएला गिजा र दाँत।यस्तो हुन भन्दा अगाडी समयमै पुरा पढ्नुहोस
दु’खद खबर: सांसद तथा नेकपाकि वरिष्ठ नेता शान्ता चौधरिलाई फेरि च्याप्यो रोगले
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62135)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44812)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29181)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27866)